Shiinaha Polycarbonate Mirror warshad iyo alaableyda | Donghua
Polycarbonate Mkhaldan, PC Mirror, Muraayada Xaashida Polycarbonate
Sida la wada ogyahay, muraayadda polycarbonatewaa substrate ugu saamaynta-u adkaysta. Muraayaddeenna polycarbonate (PC) waa xulasho habboon haddii aad u baahan tahay dusha sare oo muraayad leh oo leh iska caabin kuleyl badan iyo xoog saameyn leh. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ourmuraayadda polycarbonatewaa saameyn saameyn sare leh, adkeysi, iska caabin kuleyl badan, saafi cad iyo xasilooni cabbir leh. Waxaan leenahay dhumucdiisuna tahay 0.25 ~ 6 mm, cabbirka 915 * 1830 mm, midab qalin oo saafi ah oo la heli karo si loogu dalbado adeegyo u dhigma ilaa heer.
Magaca Badeecada Muraayadda Polycarbonate, PC Mirror, Xaashida Polycarbonate Xaashida
Cabir 36 ″ x 72 ″ (915 * 1830 mm), caado-u-jaris caado ah
Dhumucdiisuna .0098 ″ ilaa .236 ″ (0.25 - 6.0 mm)
Astaamaha Awood saameyn sare leh, adkeysi, cad-cad
Dusha sare leh filimka PE
Polycarbonate caaga muraayadda si fudud uga sarreysa muraayadda bey'adaha u baahan agab saameyn sare leh iyadoo la ilaalinayo heer sare oo daahir ah.
Codsiyada Guud waxaa ka mid ah:
Amniga & Amniga - Muraayadaha baaritaanka, gaashaammada wajiga, qalabka hagaajinta, ilaalada mashiinka, muraayadaha indhaha
Dhismaha Dhismaha Ganacsiga - Muraayadaha xarunta fayadhawrka, muraayadaha indha indheynta, iyo muraayadaha musqusha
Muujinta Iibsiga & Calaamadaha - Bandhigyada Endcap, bandhigyada qurxinta, xirmooyinka dahabka, muraayadaha muraayadaha indhaha, iyo calaamadaha tafaariiqda
Qurxinta & Ilkaha - Weynaynta muraayadaha iyo muraayadaha is haysta
Warshadaha Gawaarida - Goobaha gudaha, muraayadaha, iyo qalabyada
Isticmaal 1/8 ″ muraayad rakibidda yaryar. 24 ″ x24 ″ ama ka yar milicsiga weyn ee u dhow. Codsiga caadiga ah waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo doon, xero, soo bandhig tafaariiqeed, iwm halkaasoo daawaduhu uu aad ugu dhow yahay muraayadda. Dhumucdiisuna sidoo kale waxay u fiican tahay Miisaska Miisaska ee la dul saaray maryaha miiska dushiisa (waa ku weyn tahay dhacdooyinka). Isticmaal 1/4 ″ muraayad rakibaad ka weyn 24 ″ x24 ″.
Muraayadda Amniga oo ku jirta dukaanka: isticmaal 1/4 ″ - 30-50ftft milicsiga wuu qalloocayaa iyadoo aan loo eegin sida fidintu u siman tahay. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku tijaabiso 1 pc rakibidda noocan ah.
Qolalka Tiyaatarka iyo Qoob ka ciyaarka: isticmaal 1/4 ″ - maskaxda ku hay in milicsiga uusan u fiicnaan doonin sida muraayadda - laakiin muraayadda Plexiglass ayaa loo isticmaali doonaa codsigan badbaadada - maaha tayada milicsiga. Milicsiga ayaa kaliya ufiicnaan doona sida flatness ee rakibaadda.
Naadiyada iyo Makhaayadaha: u isticmaal 1/4 ″ badbaadada iyo xoogga.
Hadaad isticmaasho boolal loogu talagalay sii kordhaya, Waxaad kuheli doontaa dhalanrog xagga milicsiga ah. WAXAAD U BAAHANTAHAY Qalliin Daloolin Plexiglass ah si aad u samayso daloolka. Nagu kalsoonow - waxaad ku jebin doontaa ama ku dillaaci doontaa caagga xoogaa bir ah. Cajaladda Wejiga Labaad - hab sahlan oo loo fuulo. Koollada Xiriirka Biyaha Ku Salaysan - xalka joogtada ah ee dusha sare ee FLAT.
U isticmaal alaabada Brillianize ama Novus nadiifinta iyo xoqidda xoqida. Ama saabuun iyo biyo. Ha u isticmaalin Windex ama 409. Faa’iidada ayaa ah in muraayada polycarbonate MA BADDO oo maareyn karto heerkulka sare (250F). Waxay kufiicantahay saldhigyada booliiska, qeybaha dhimirka, xabsiyada ama qalab kale oo jajaban. Muraayadda Polycarbonate gabi ahaanba lama saari karo xoqitaanka. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan soo wac. Waxaan iibinaynay muraayad muddo 20 sano ah waxaanan ka caawinnaa macaamiisheenna inay doortaan waxyaabaha ku habboon codsigooda.
muraayad caag ah oo dabacsan
polycarbonate muraayad ah
warqad polycarbonate muraayad ah
muraayad caag ah
warqad muraayad polycarbonate ah